बिट्स संक्रमित तपाईको कम्प्यूटर यदि तपाईं टाढा हुनु पर्छ? - सिल्लल्ट विशेषज्ञले जवाफ दिन्छ
बोटनेटहरू रोबोट सञ्जालका रूपमा पनि चिनिन्छन्। यो वास्तवमा कम्प्यूटरको एक विशाल सञ्जाल र भाइरस वा मालवेयरद्वारा संक्रमित मोबाइल यन्त्रहरू हो। हैकहरूले यो मैलवेयर नियन्त्रण गर्दछ र विभिन्न प्रकारका कार्यहरू प्रदर्शन गर्छ। यी हैकर वा स्प्यामरहरू प्राय: बोट हेडरहरूको रूपमा मानिन्छ। प्रत्येक संक्रमित मिसिन नियन्त्रित र संचालित विशेष बट द्वारा संचालित छ, र आक्रमणकारीले उनको ब्वाटेननेटमा कम्प्यूटरको आदेश गर्दछ र समन्वयित आपराधिक कार्य गर्दछ।
ब्नेटनेटहरूको मात्राले आक्रमणकर्ताहरूले ठूलो मालवेयर वा भाइरसको साथ प्रदर्शन गर्न असम्भव हुने ठूला ठूला कार्यहरू प्रदर्शन गर्न सक्षम गर्दछ। चूंकि रिमोट आक्रमणकारीहरूको नियन्त्रणमा बनिनेटहरू रहेका छन्, संक्रमित यन्त्रहरू नियमित रूपमा अद्यावधिकहरू प्राप्त हुन्छन् र उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्न जारी राख्छन्। नतिजाको रूपमा, बटबारीहरू सजिलैसँग बोलपत्रहरू र अपराधीहरूसँग पहुँच गर्न सक्छन् र आफ्नो ब्रोनट्स विभाजनहरूलाई ठूलो अपरेसन सञ्चालन गर्न को लागी विभाजित गर्न सक्छन्, जसले तिनीहरूलाई धेरै वित्तीय लाभ दिने उद्देश्य राख्दछ।
botnets को क्षमताहरु:
बोटनेटहरूको सबैभन्दा सामान्य कार्य वा क्षमताहरू माइकल ब्राउन, सेल्टल्ट ग्राहक सफलता प्रबन्धकद्वारा तल वर्णन गरिएको छ:
(1 9) 1। इमेल स्पाम
जब तपाइँ हरेक दिन धेरै इमेलहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, संभावनाहरू तपाईंको ईमेल आईडी हैकरको आक्रमणमा छ। स्प्याम botnets ठूलो आकारमा छन् र मालवेयर सहित स्प्याम सन्देशहरू पठाउन प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू अक्सर संख्याहरू अनियमित बस्तुबाट अनदेखी गर्छन्। उदाहरणको लागि, कटावामेल botnet दैनिक आधारमा 70 बिलियन सन्देशहरू पठाउन सक्दछ। यो व्यापक रूपमा भाइरसहरू र बटहरू फैलाउन प्रयोग गरिन्छ र केन्द्रित बोस्टटमा कम्प्यूटर र अधिक कम्प्यूटरहरू भर्ती गर्दछ। Source - office cabling companies.
(1 9) 2। DDoS हमला
DDoS आक्रमणले ठूलो मात्रामा ब्निनेट प्रयोग गर्दछ र विशेष अनुरोधका साथ लक्षित नेटवर्क वा सर्भरहरू ओभरलोड गर्दछ। तिनीहरू पनि आफ्नो लक्ष्य 'कम्प्युटरहरू प्रदान गर्छन्, र उनीहरूका मुख्य लक्ष्यहरू ठूला संगठनहरू, राजनीतिक दलहरू, र आयात-निर्यात कम्पनीहरू हुन्। तिनीहरू वित्तीय लाभको लागि आक्रमण बन्द गर्छन्।
(1 9) 3। वित्तीय उल्लङ्घन
वित्तीय उल्लङ्घनले ब्वाटेननेटहरू समावेश गर्दछ जुन ठूलो उद्यमहरूबाट निधिहरूको प्रत्यक्ष चोरीहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ। तिनीहरूले क्रेडिट कार्ड जानकारी र पेपैल पासवर्डहरू पनि चोरी गर्छन्। जेबस बोस्टनेट जस्ता वित्तीय बटनीहरू धेरै ठूला आक्रमणहरूका लागि जिम्मेवार छन् जसमा धेरै लगानीहरू धेरै चोटि धेरै चोटि धेरै चोटि चोरी भएका छन्।
(1 9) 4। लक्ष्यित घुसपैठ
यी साना-आकारको ब्निनेटहरू जसले उच्च-अन्तको बट्टा समावेश गर्दछ र निर्दिष्ट कम्प्यूटरसँग सम्झौता गर्छ। आक्रमणकारीहरूले संस्थाहरूलाई बिटहरू पठाउँछन् जुन संक्रमित सञ्जालमा थप उपकरणहरू घुसाउन र घुसाउन सजिलो छ। घुमाउन खतरनाक हुन्छन् किनकि तिनीहरू ठूलो संगठनहरूमाथि आक्रमण गर्छन् र वित्तीय डेटा, बौद्धिक गुणहरू र ग्राहक जानकारी चोरी गर्छन्।
यो बोल्न सुरक्षित छ कि बोटनेटहरू सिर्जना गर्दा एक विशेषज्ञले प्रयोगकर्ताको ज्ञान बिना उसको नियन्त्रण प्रणाली वा एक विशिष्ट सर्भरबाट बोट्स पठाउँछ। बूटनेटहरूले तुरुन्तै धेरै मिसिनहरू संक्रमण गर्छन्। एकपटक तपाईंले दुर्भावनापूर्ण फाईलहरू खोल्नु भएपछि, बटहरूले बोटमास्टरलाई फिर्ता दिनेछ र उनीहरूलाई थाहा छ कि नयाँ कम्प्युटर यन्त्रमा आक्रमण गर्न तयार छ। बोटनीटहरू र बटहरूको केही विशिष्ट कार्यात्मक विशेषताहरूले तिनीहरूलाई दीर्घकालिक घुसपैठको लागि उपयुक्त बनाउँदछ।